NgoFebruwari, 2012 Ukulanda, Okufumaneka, Google umhlaba / imephu
Umda wepropathi, inqanaba leCadastre yebhanki
Post edlulileyo«Ngaphambilini Funda AutoCAD Viewing
Post Next AutoCAD ikhosi 3D kwi ucango lwakho, ngokuba $ 34.99Okulandelayo »
Iimpendulo ze-114 ziye kwi "Excel kuGoogle Earth, ukusuka kwizilungelelaniso ze-UTM"
Molo, ungabelana ngesicelo sokuvavanywa okanye sokuvavanywa okwethutyana "Excel to Google Earth, ukusuka kwi-UTM ulungelelwaniso", kuphela ngeenjongo zemfundo nakwindlela endikhuthaza ngayo isicelo sakho. Enkosi
Landela izindululo zendawo, faka ulwazi kwaye ubuye okanye impazamo »IMicrosoft Visual Basic» Impazamo ngexesha lokuphumeza «13»: Type Incompatíveis.
Ndiqhuba inkqubo kwaye ndifumana i-'mpazamo yexesha lokubaleka '
Molo Carolina, sele sikuthumele ikhonkco kwi-imeyile yakho. Kungenzeka ukuba uye kwi-spam yakho.
Ukuyandisa kumanqaku amaninzi, kuyimfuneko ukuguqula ikhowudi. Thumela itemplate kumhleli @ geofumadas kwaye siya kuyandisa.
Molo ekuseni Juan Pablo. Silucekisile ikhonkco kwi-imeyile yakho, ukuze ukhuphele. Inokwenzeka ukuba ihambile kwi-spam yakho.
Bandihlafunise ngefayile, ndayibhatala "umfuziselo umnikelo" kabini kwaye andifumananga fom.
«Imposiso akukho tempo de execução '75':
U-Erro ukusuka ekufumaneni indlela / kwiindawo ezigcina ugcino ».
Indlela elula yokufumana iindlela, i-google chrome evulekile, kwaye ukusuka apha usebenzisa i "ctrl + o» kwaye ujonge ifayile. Kwi-url uza kubona indlela.
Sithumele ikhonkco ngeposi. Nangona kunjalo, uhlala ubona i-spam, ngamanye amaxesha iya apho.
Sele siyibuyisele itemplate oyithengileyo kabini. Ukuba uneengxaki ezininzi, sazise.
Sikuphendule ngeposi. Ngamanye amaxesha iya kugaxekile, kodwa sikudlulisele ikhonkco. Ukuba uneengxaki, usazise.
Geofumadas.com manene, ndihlawulele kwaPayPal imveliso ethi "COCEL TO GOOGLE EARTH TO UTM COORDINATES" kwaye ngexesha lokukhuphela le nkqubo indithumela kwakhona kwiPayPal, kwaye ngempazamo kwakhona idola ye- $ 4.99 USD ihlawulisiwe.
Jonga ugaxekile. Ngamanye amaxesha uya apho. Ukuba uneengxaki, bhalela i-imeyile evela kwi-invoice.
Ngamanye amaxesha uya apho. Ukuba unayo nayiphi na ingxaki, phendula kwi-imeyile eboniswe kwisiqinisekiso sentlawulo.
Kukwiposi yakho. Jonga ukuba ngamanye amaxesha iya spam
Le template yenzelwa ukufaka idatha ye-UTM. Iimpawu zinokongezwa ukuba zibe ziidigri okanye iidigri / imizuzu / imizuzwana.
I-2-Ndiyakwazi ukuluguqula uhlobo lwe icon ngokulungelelanisa.
Vuselela iphepha, kuya kufuneka ubone ikhonkco lokuKhuphela / lokuthenga
molo kuhle ubusuku ingxaki yam kukuba ndaqala ukuphuma xa ndiyinika ukuba yenze i-kml "impazamo ye-75 yokuphunyezwa" kwaye emva koko ndenza oko bakuthethayo ndifumana "76 impazamo yokuphumeza" endinokuyenza
Ngokukhethekileyo iguqulela kubo ukuya kwi-latitude 32400.000000 kunye nobude -1.000000 ° Besebenzisa ii-inxibelelaniso ezifanayo kwizibalo zokuguqula, nangona kunjalo, ndijonga ukuba umgodi wokuqala ulungile, kuba ndihlela inqaku kuGoogle google, ndibeka izihlanganisi zesibali kwaye iyandibeka kakuhle. Enkosi kakhulu
Nantoni na endiyenzayo (ndiyilungiselele yonke into ukwenzela ukuba i-decimals ihambe kunye nexesha kunye namawaka ngamakomishini) ihlala indisa kwiikhweyitha. Ukuphakama ndicinga ukuba kulungile kum, kodwa ikwi-0. Ngokukodwa ndibeka le datha ye-UTM ye-ED50 engeyiyo i-wgs84 eyeyaseNtla Spain (Navarra), kwaye ngokucwangcisiweyo ndaphelela kwiGulf of Guinea.
Emva koko uya kuseto lwengingqi yomatshini wakho kwaye wenze utshintsho. Uyacelwa ukuba usebenzise ikhoma njengokwahlulahlula amawaka kunye noluhlu olwahlulahlula uluhlu; Inqaku njengomseki wokugqibela.
Ndiyenzile le fayile kodwa xa uyijonga emhlabeni iyandithumela kwisipu se-N. Ndithi kuwe: I-UTM inxibelelanisa ukuba ndiyisebenzisa yaguqulwa ukusuka kulungelelwaniso nobude, kodwa kusetyenziswa i-dXXUMUMX yedatha endaweni ye-WGS50. Ngaba kufuneka ndigqithise ngaphambili kwifomathi ye-UTM esetyenziswa kwi-Excel? Ngapha koko, ndacinga ukuba nokuba azidibani, isikhewu besingayi kuba siphezulu kakhulu, kuba ukuba ndingathelekisa ezinye iindlela zokunxibelelana nezo ndisebenzisa ne-ED84 kunye nabo e-WGS50 (abasuka eSpain), isiza esiziimitha ezimbalwa, kodwa kwimephu Ndicinga ukuba akukho nto uyibonayo, ngaphandle kwelebheli ezikumqolo "welebheli". Ngaba kukho uluvo lokuba ndonile phi? amanyathelo kunye nefomathi yedesimali avela achanekile (umda yi-84 no?).
Ndibhalele ukuguqula ukusuka kwi-geographic ukuya kwi-UTM, kodwa ndinengxaki kwifayile yokuvelisa ifayile yokuya kuGoogle ukuba ivelisa ifayile kodwa onke amanqaku ahlala ne-180grades 0minutes 0.00minutes 74Seconds North and with Latitude 0 degrees 0.00 Minutes and XNUMX imizuzwana I-West nayo ayibonisi inqaku kwimephu. Ndiyabulela ukuba ungandinceda. UGloria Dominguez
Nceda undiqinisekise ukuba kutheni ndingafumananga itemplate yokukhuphela iifayile zikaGoogle google, ukugqithisa izixhumanisi zejografi kwi-UTM zenze. Enkosi IGEDL
Enkosi ngokuphendula, ndenze into endayixelelweyo. Ingxaki iyaqhubeka, nangona kunjalo, ndiye ndatshintsha igama elabelwe kwifayile ye-kml yokukhuphela kunye nokuphucula into. Ukusuka kwinkxaso yomhlobo nditshintshile ukusuka kwi «\_ SIMV \_ MAPAS.000.000.000.kml» ukuya kwi «\_ SIMV \_ MAPS \_ test.kml». Ngoku ayiyithumeli kwifolda eyabelwe ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kodwa ekugqibeleni ifayile yenziwe, ikwincwadi efanayo apho ispredishithi ingaphezulu.
1 Qhubeka 2 Gqibezela i-3.Ingxelo ye4.Help
Eyona nto isebenzayo kukuba kwisikhangeli se-Intanethi, jonga idilesi ukuze ubone indlela, kuba ukuba unegama lendlela enendawo engenanto enje: «amaxwebhu am», kufuneka uyibhale njengoko ivela kwi-URL yesikhangeli.
Molo ungandinceda ndifumane "i75 impazamo yexesha lokubaleka" ndinike imizekelo "yeendlela" zokwenza ifayile ye-kml ngayo. Umzekelo wamaxwebhu am kunye nokukhutshelwa okanye kwi desktop. Enkosi
Ngamanye amaxesha ngumbuzo wokuba indlela ayakhiwanga kakuhle. Enye indlela yokubona ukuba injani loo ndlela kukuvula ifayile yefayile kwisikhangeli, ucofa ekunene emfanekisweni kwaye ukhethe ukuvula nge ... kwaye ukhethe isikhangeli; ujonge indlela engentla.
“Impazamo '13' yenzeke ngexesha lokusebenza.
Iintlobo azihambelani »
Yizame Kuba itemplate yeyokujonga umda ukwahlula amawaka kunye namanqaku ukwahlula ama-decimals; Kuya kufuneka uyisebenzise ngaloo ndlela.
Kungenxa yokuba ndikhawulele ukufikelela ku-C: Ukutshintsha indlela kuyivelisa ngaphandle kwengxaki. Ndiza kuzama ukwenza leyo ivelise ipoligoni.
Khumbula ukuba ii-orthophotos zikaGoogle Earth ziyekisiwe, zokwahluka okwahlukileyo. Ke xa uvelisa ulungelelwaniso olwaziyo, kunye nethemplethi, qinisekisa ukuba yintoni ehambelana nokuboniswa kukaGoogle Earth, ukubona ukuba iyahambelana na into oyithengisileyo evela kwitemplate kunye ne-Datum WGS84.
Ukuba ukulungelelanisa umdlalo, kodwa kucinywe kwifoto, kunokuba impazamo zivela kumfanekiso. Nokuba yeyiphi indlela endiphakamisa ngayo ukuba banike ingxelo ngeempazamo abazifumanayo, kuba ndivelise itemplate yokusetyenziswa simahla kodwa ifuna ukuba bandinike ingxelo ngokubonayo.
src = »ifayile: /// C: /Users/User/Downloads/woopra_ios.png»
Ndangena ndinxibelelanisa kwiZone 19N kwaye idatha yawahliwe ngokupheleleyo.